Labo wiil oo dhaqaatiir ahayd oo galabta ku geeriyootay xeebta Hobyo – Xorriya Online
Labo wiil oo dhaqaatiir ahayd oo galabta ku geeriyootay xeebta Hobyo
Wararka ka imaanaya degmo Xeebeedka Hobyo ayaa kusoo waramaya In Badda Hobyo ay galabta ku dhinteen Labo wiil oo oo dhaqaatiir ahayd, kuwaas oo u dabaal tagay xeebta Madaama ay maantay ahayd maalin Jimco ah.
Labaan ruux oo u dabaal tagay Xeebta Hobyo ayaa ku geeriyooday halkaas, kaddib markii ay biyo qaadeen. Magacyada labada marxuum ayaa lagu kala sheegay Dr. Abdirizakh Awil Durmad Iyo Dr. Abshir Hassan Diiriye.
Labada marxuum ee geeriyootay ayaa ahaa dhaqaatiir dhalinyaro ah waxayna ka shaqeynayeen Isbitaalka Deegaanka Gawaan, maadaama ay maanta tahay maalin nasiino ayey u dalxiis & dabaal tageen magaalo Xeebeedka Hobyo ee Gobolka Mudug, waxaana iyagoo dabaalanaya ay la tagtay baddii.
Marxuumiinta ayaa la sheegey inay laqeen biyaha Badda oo aad u kacsanaa isla markaana Hirar badan samaynayay. Mana ahan markii ugu horreysay oo ay dad udabaal tagay xeebta Hobyo ay baddu liqday.
Badda Hobyo oo mid ka duwan xeebaha Soomaaliya marka loo eego Joogga iyo Gunta biyaha oo aad u dheer ayaa inta badan waxaa ku badan kacsanaanta Hirarka taas oo sababta dhimashada kalluumaysatada iyo Dadka u Dabaal Taga.